Raadin Online - Inaad noqotid internetka mukhadaraadka ah ayaa yeelan kara wejiyo badan
Raadinta internetka | Internet Media
Calaamadaha iyo sababaha loo isticmaalo maandooriyaha
Sidee ayaad u daaweyn kartaa qabatinka internetka?
Cunnugaygu miyuu kuftay macaamil
Miyaa laga helaa dukaanka internetka? Mabda 'ahaan, bini'aadanku waxay noqon karaan kuwo qabatimay wax kasta oo ay la kulmaan nolol maalmeedkooda. Laga soo bilaabo telefishanka iyo sidoo kale laga soo bilaabo khamriga, sigaarka ama cuntada. Dabcan, tan iyo da'da internetka, sidoo kale.
Maandooriye ayaa had iyo jeer lagu tilmaamaa in qofkasto ma noolaan karo iyada oo aan la isticmaalin maadada mukhaadaraadka, kiiskan internetka. Takhaatiirtaani waxay noqon kartaa waji badan waxayna ka duwan yihiin wiilasha iyo gabdhaha. Mid ka mid ah todoba qof oo internetka ah maanta ayaa la sheegaa in ay saameeyeen mukhaadaraadka. Dhanka kale, qabatinka internetka ayaa si rasmi ah loo aqoonsan yahay inuu yahay cudur.
Isbarbardhig galmo ee internetka
Iyada oo ku xiran waxa sabab u ah qabatinka internetka, dabeecadaha kale ayaa ku jira qorshaha hore. Si kastaba ha noqotee, xaqiiqadu waxay tahay in jinsiga labka ah uu u eg yahay in ay ku badan yihiin ciyaaraha online-ka ah.
Haddii ciyaaraha ama ciyaaruhu aysan muhiim u ahayn halkan, waa wax badan oo ku saabsan dabeecadda xad-dhaafka ah ee ciyaaraha kombiyuutarka.
Dumarka iyo gabdhaha waxay u badan tahay in ay joogaan goobaha wakhti kasta, wadaagaan meheradaha iyo la sheekaysiga aan joogsi lahayn. Kumbuyuutarku wuxuu shaqeynayaa saacad kasta, waxna kuma shaqeynin.
Dabcan, xadka u dhaxeeya qabatinka iyo isticmaalka joogtada ah waxaa markii hore dal, sidaas waxa kale oo aad qabatinka online ka fog lagu aqoonsan karo sida. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad had iyo jeer kor u fadhiya dambe habeenkii on computer ah, hurdo yar, cid billowda cunto uu ku qaadan at computer ka, kuwaas oo la dayacay saaxiibada iyo baxday iyo aad u badan in ay ku noolaadaan dunida dalwaddii, halkii ay xaqiiqda, laga yaabo waa online qabatimo ama halis sare u noqdo sidaas.
Aqoonsiga warbaahinta - isticmaalka casriga iyo kombiyuutarada
Sidoo kale raaxo la'aanta jireed waxay keenaysaa isticmaalka mukhaadaraadka online-ka ah. Marka laga soo tago dhibaatooyinka indhaha waxay sidoo kale dib u dhigi karaan xanuunka iyo xiisadda, taas oo keenaysa in badan oo fadhiya. Daryeelka jirku si aad ah ayuu u dayacmay sida kuwa kale. Tani waxay xitaa tagi kartaa illaa haddaad dayacday.
Inta badan ka dambeeya isticmaalka maandooriyaha internetka waa cudur kale oo maskaxeed, sababtoo ah maandooriye online maahan cudur madax-bannaan. Cudurrada internetka ayaa inta badan la xiriirta calaamadaha niyadjabka, cilladaha walaaca iyo cudurrada kale ee shakhsiyeed, waa calaamad ka mid ah cudurradan, si markaa loo hadlo.
Xaqiiqadu waxay u muuqataa mid aan la hubin, kaliya adduunka oo dhan waa mid ammaan ah. Isku kalsoonida dadka khadka ah ee online-ka ah, sida kuwa kale ee xad-dhaafka ah, ayaa badanaa daciif ah. Haddii kombiyuutarka la xiro, ama aan awoodin isticmaalka internetka, calaamadaha sida xanaaqa, xasiloonida, iyo niyad-jabka.
Sida dhammaan waxyaabaha kale ee macaamilada, gelitaanka daroogada ayaa ah marka hore.
Qabsashada internetka ee dadka waaweyn
Markii la aqoonsado oo la aqoonsado, waxaa badanaa ka caawisaa in ay la tashadaan khabiir si loo baaro sababta dhabta ah ee takoorka, taas oo ah, mid ka mid ah cudurrada maskaxda ee kor ku xusan.
Haddii tan la daaweeyo, xatooyada internetka waxay kaloo qaadataa kursiga dambe. Bukaanku waa inuu ogaadaa in Internetku aanu xalin karin dhibaatadiisa.
Bilowga, sidoo kale waxay ka caawisaa in la yareeyo wakhti internetka tallaabo tallaabo ah si ay u sameeyaan waxyaabaha maalin kasta ah: beerta, socodka, cunida, saaxiibada kulanka.
Dabeecaddan caadi ah waa in la barto si macno leh. Kooxaha iskaa wax u qabso waxay noqon karaan caawimo weyn wakhtigan iyo wixii ka dambeeya.
Haddii cunuggaaga uu saameeyo isticmaalka mukhadaraadka, waxaa lagu ogaan karaa caawimada calaamadaha kor ku xusan, ugu yaraan waxaa laga goyn karaa inuu jiro khatar. U digtoonow oo xusuusnow wakhtiyada uu ilmahaagu isticmaalo internetka. Taas oo kali ah ayaa macno leh.
Haddii aad qabtid wax welwel ah, ballan lala yeesho takhasusle ayaa ku caawin kara. Intaa waxaa dheer, waa inaad dabooleysaa isticmaalka isticmaalka oo hubi in ilmahaagu ciyaarayo isboorti iyo dad badan oo isku wada mid ah, dabcan, iyadoon internetka isticmaalin! Qofkasta oo leh nolol nool oo firfircoon marar dhif ah ayaa la qabatimay!
Telefishanka carruurta | Internet Media
Cyberbullying | Internet Media
Warbaahinta - Buugaagta casriga ah ee Internetka
Waa maxay sababta buugaagta carruurta? | Warbaahinta buugaagta
Kombiyuutarada iyo Internetka bilowga ah
Mashiinka raadinta ilmaha Carruurta internetka